Zvakazarurwa 5:7 Akavuya akatora bhuku muruvoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro chovushe. Vanhu Vaviri?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Zvakazarurwa 5:7 Akavuya akatora bhuku muruvoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro chovushe. Vanhu Vaviri?
Zvakazarurwa 5:7 Akavuya akatora bhuku muruvoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro chovushe. Vanhu Vaviri?
Kana Jesu ari Mwari, angatora sei Bhuku kubva muruvoko rwaMwari rwerudyi?
“Shure kwaizvozvo” -Izvi zvaive mumashure memakore 2000 enhorondo yekereke, zvatsanangurwa kunaZvakazarurwa muChitsauko 2 ne3, zvikapedzwa.
Jesu ndiye Mukova weDenga. Iye ega anopa Hupenyu husingagumi kumutendi. Hupenyu husingagumi ndiyo pasipoti yekupinda Denga. Pasina hupenyu husingagumi hamugoni kugara kuDenga. Mukova wekuenda kudenga unozarurwa apo Jesu anomutsa vakafa. Vatsvene vanorarama vakadzoserwa pakutenda kwekereke yekutanga vanobva vashandurwa kuiswa mumiviri yakafuka kusavora.
MARAKI 4:5 "Tarirai, ndichakutumirai muporofita Eria, zuva iro guru raJEHOVA, rinotyisa, risati rasvika.
Kutukwa kunonamira kworembera. Ndiko kuita kwekubata kwebhomba reatomi. Vasati vatadza, muprofita akaita saEria anodzosera isu vana maKristu enguva yekupedzisira kuti titende zvakatendwa nemadzibaba mapostora venguva yekereke yekutanga.
Hakuna anotevera kumashure kwaEria (muchiGiriki Erija) paanotidzosera pakutenda kuBhaibheri reKing James Vhezheni rinova rakanaka uye rakanyorwa nemazvo izwi kuizwi neGwaro rekutanga reMagwaro Matsvene. Kana tikamuterera, tinozokwanisa kunzwisisa Bhaibheri.
Ipapo, vanhu ava vanenge vadzoserwa pakutenda kwekereke yekutanga, vanotorwa kuenda kunosangana naShe Jesu kuDenga. Vatsvene vanorarama vanenge vadzorerwa pakutenda kwekereke yekutanga vanobva vashandurwa voita mirivi isingawori, kukura kana kufa.
I VATESARONIKA 4:16 Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira, nenzwi romutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari; vakafa munaKristu vachatanga kumuka
Hwamanda inozivisa kuti Johane anofanira kukwira kuDenga, munhu mumwechete anomiririra kereke yese anotorwa kukwira kuDenga.
“ … ndigokuratidza zvinofanira kuitwa shure kwaizvozvo.” Zvino tinoona zviitiko zvakaitika kuDenga kana kereke yechokwadi (inodaidzwa zvakare kuti Mwenga waKristu) yabva paNyika.
Akazadzwa neMweya Mutsvene, Johane akatarisa kuDenga akaona Munhu mumwechete akagara pachigaro chehushe. Munhu uyu aive Mwari weMasimba ose. Kwaive kusina Tiriniti. Haana kuona Vanhu vatatu vagere vose pachigaro chehushe.
Chitsauko chekutanga chaZvakazarurwa chinozivisa Jesu ari Iye waMasimba ose.
ZVAKAZARURWA 1:8 Ndini Arfa naOmega, wokutanga nowokupedzisira, ndizvo zvinoreva Ishe Mwari, uripo, wakanga aripo, nouchazovapo, wamasimba ose.
ZVAKAZARURWA 4:8 Nezvisikwa zvipenyu izvi zvina zvakanga zvizere nameso kunhivi dzose nomukati; hazvizorori masikati novusiku, zvichiti: Mutsvene mutsvene mutsvene, iye Ishe Mwari wehondo, wamasimba ose, iye wakanga aripo, uripo, nouchazovuya
Aive Mwanakomana weMunhu neMuviri wake akaponesa nyika paCalvari.
Ndiye Mwanakomana waMwari uyo neMweya unoshamisa arikupfuudza zviitiko zvenguva yekupedzisira kumaJuda nemaHedeni, zvino nokuti mutambo wemuChato watanga kuDenga uye nguva yeKutambudzika inobva yatangawo paNyika.
Achauya seMwanakomana waDavidi paanosvikobata nyika saMambo, mukati memakore 1000 erugare.
ZVAKAZARURWA 5:1 Zvino ndakavona muruvoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro chovushe bhuku yakanyorwa mukati nokunze kwayo, yakanamatidzwa nezvisimbiso zvinomwe.
Munzvimbo zhinji panyika, dzimba dzine matsamba ekuratidza muridzi wadzo. Tsamba yekuratidza muridzi inotiratidza kuti akaripira muripo wekutenga imba kana munda iwoyo ndiyani. Hamugoni kuva nemba kana munda musina kuripira kuti muutenge.
Pano tinoona Bhuku rinomiririra tsamba yekuratidza muridzi weNyika yese. Bhuku iri rinoratidza kuti muridzi weNyika ndiyani. Adamu aive muridzi weNyika pakutanga. Yaive yake kuti aibate uye agare mairi. Akarasikirwa nemunda uyu paakasarudza kutadza, tsamba dzekuratidza muridzi wemunda dzikadzokera kuMusiki-muridzi wekutanga aive Mwari. Kuti mumwe munhu ave muridzi wetsamba dzemuridzi weNyika, munhu iyeye aifanira kuparadza chivi kuitira kuti Nyika idzikinurwe neRopa risina mhaka uye yonatswa nemoto. Kunatswa nemoto uku kuchaitika munguva yeKutambudzika kukuru. Rudzi rwevanhu nehumbwende rwakatogadzira mabhomba eatomi kare achabata chikamu chebasa iri. Asi tese takaberekwa tiri vatadzi, saka hatigoni kuzvinatsa kubva kuzvivi.
ZVAKAZARURWA 5:2 Ipapo ndakavona mutumwa, unesimba, achidanidzira nenzwi guru; achiti: Ndianiko wakafanira kuti azarure bhuku iyi, nokusunungura zvisimbiso zvayo?
Iyi yaive nguva yekuti mumwe munhu asimuke auye mberi kuzotora matsamba ekuti ave muridzi weNyika yese.
Allah, Bhuddha, Muhammed, Krishna, Confucius, Karl Marx, Pope, maArabu, vaParesitina, Vasingatendi, vaiti vemabasa akanaka, vanhu vakuru vezvemauto, vanhu vezvematongerwo enyika vane simba, kana vatungamiri vemakereke emasangano. Vese vane zvakawanda zvekutaura pamusoro pekubata kwavo. Zvino mutongi mukuru anouya kuzoongorora kuti zvavanotaura ichokwadi chakadii. Vanogona here kubereka zvakanaka voparadza zvivi voponesa vakarurama?
Zvinoshamisa, zvinoshamisa. Hakuna anouya kumberi. Hakutorina chero mumwechete anogona kutarira paBhuku iri. Kwete chero Mosesi. Kwete kana Petro mutsvene. Kwete mupostora Pauro. Kwete chero William Branham. Hakuna kana munhu mumwechete. Hakuna chero munhu wenyama anogona kuzarura Bhuku iyi, kana kutoti anoda Bhuku iyoyo. Ndiko kuoma kwakaita kuparadza zvivi.
Takaberekwa nekuzivana kwemunhurume nemunhukadzi kana kusangana pabonde. Hupenyu husingagumi haugoni kubva kumubereki kuenda kumwana nekusangana pabonde. Takaparadzwa kubva pakutanga.
Johane akachema. Zvisikwa zvaive zvaita sezvakarasika. Hakuna munhu akawanikwa akagona kuenda mberi kunoripira muripo waidiwa naMwari kuti uripire zvivi.
Mwari Baba ndivo vakasika Nyika. Hwaro hwake huri pamusoro kwazvo. Kana muchida kutora matsamba ekuva varidzi vedzikinuro yeNyika nevanhu vayo, munenge muchifanira kuripira muripo mukuru unotyisa.
Hakuna munhu anokwanisa kuzviripira ega muripo wake. Saka tinofanira kumira kutarisira kuchengetedzwa nechero munhu.
ZVAKAZARURWA 5:5 Zvino mumwe waVakuru wakati kwandiri; Usachema hako, tarira, Shumba yorudzi rwaJuda, Mudzi waDavidi, yakakunda kuti izarure bhuku nokusunungura nezvisimbiso zvayo zvinomwe.
Shumba ndiyo mambo wemhuka dzesango.
Jesu aive werudzi rwamambo Davidi aive werudzi rwaJudah (kana kuti Juda).
RUKA 3:31 Mwanakomana waMerea, mwanakomana waMena, mwanakomana waMatata, mwanakomana waNatatamu, mwanakomana waDavidi,
RUKA 3:33 Mwanakomana waAminadabi, mwanakomana waAdmini, mwanakomana waArni, mwanakomana waEsromi, mwanakomana waFaresi, mwanakomana waJuda.
Jesu ndiye Mambo mukurusa akabva kurudzi rwamambo mukuru Davidi. Mambo mukuru Jesu ndiye Shumba huru akakunda zvivi zvinova muvengi wedu mukuru nekuti zvivi ndizvo zvinobereka rufu nekutambudzika.
ZVAKAZARURWA 5:6 Zvino ndakatarira ndikavona pakati pechigaro chovushe nezvisikwa zvipenyu zvina, napakati paVakuru, Gwaiana rimire, rakaita serakabayiwa, rinenyanga nomwe nameso manomwe, iri Mweya minomwe yaMwari, yakatumwa kunyika yose
Pakabva paita shanduko yaive isina kutarisirwa.
Johane anotsvaga Shumba oona Gwaiana rinotora Bhuku.
Johane anotsvaga Shumba. Kutsanangurwa kwehunhu hwaJesu uku kwekunzi Shumba kunomiririra basa rakaitwa naJesu rekusika nyika.
Asi akaona Gwaiana. Uku kutsanangura hunhu hwaJesu zvakare achiita basa reMuponesi.
Chii chiri kuitika? Shumba huru inotyisa ingava sei Gwaiana rinoninipiswa uye risina simba?
Mambo, Shumba yerudzi rwaJuda, yakakunda hondo yayo huru naSatani paakamukurira paCalvari.
MABASA 20:28 Zvichenjererei imi, neboka rose ramakaitwa vatariri varo noMweya Mutsvene, kuti mufudze kereke yaMwari, yaakatenga neropa rake.
Mambo Jesu, Shumba, akakunda kurwa kwake kukuru paakafa pamuchinjikwa ari Gwaiana rechibairo.
Samsoni akatipa muono uyu paakakunda kurwa nevaFirisitia paakawisira masvingo pasi akabva afa naiyewo.
Isaya anotaura nezvaMwari.
ISAYA 33:3 Marudzi avanhu akatiza achinzwa mubvumo, marudzi akaparadzirwa imi muchisimuka.
Mwari akasimudzwa paCalvari.
Mwari akashandisa Calvari kuyananisa zvakare rudzi rwevanhu naye.
VAROMA 5:10 Nokuti zvatakayananiswa naMwari nokufa kwoMwanakomana wake, tichiri vavengi vake, zvikuru tichaponeswa kana tayananiswa novupenyu bwake;
Mwari aive aripi apo Mwanakomana waMwari, Jesu, paakafa achiyananisa isu naMwari?
II VAKORINTE 5:19 Ndiko kuti Mwari wakanga achiyananisa nyika naye munaKristu akasavaverengera kudarika kwavo, akatipa isu shoko rokuyananisa.
Mwari baba, Mweya unoshamisa, waive mumuviri weMwanakomana wake, Jesu, aive munhu wenyama.
Mwari aive nemabasa maviri ekuita. Musiki, Shumba Mambo, anoisa hwaro hwekuripirwa kwezvivi – uyezve Gwaiana, munhu wenyama akaitwa chibairo akakunda kugona kusvika pahwaro uhu akatidzikinura.
Shumba yaive Musiki.
Gwaiana raive Mudzikinuri.
Musiki aive Mwari ari pabasa ari Mweya unoshamisa usingaonekwe.
Mudzikinuri aive Mwari achibata basa ari munhu aizova hama mudzikinuri kwatiri, sezvakaitwa naBoazi kuna Rute.
Jehova Mwari akava Munhu nekugara muMuviri wemunhu Jesu Kristu.
Saka Jesu akaita zvisingagoneki. Akabatanidza munhu naMwari muMunhu mumwechete.
JOHANE 3:13 Hakuno munhu wakakwira kudenga, asi iye wakaburuka kudenga, iye Mwanakomana womunhu.
Izvi hazvigoneki nesu vanhu.
Munhu Jesu paaifamba paNyika, Mweya waMwari unoshamisa usingaonekwe waive maari waive zvakare kuDenga.
Nekuti Jesu anogara akadaro haashanduki, kana kuzara kwehuMwari kwaimbova maari, zvino kuzara kwehuMwari kwaive kwagara kuri maari.
Saka Musiki akafa ari munhu kuti aponese zvisikwa zvake.
Mwari anofa sei?
Rufu hakusi kuparadzwa kwemweya wemunhu. Rufu kubuda kwemweya mumuviri chete.
Saka Mweya unoshamisa waive wakaputirwa muhumunhu hwaKristu wakabuda muMuviri wake paakafa.
Mweya wake wakaburukira kugehena kunotora makiyi erufu neegehena kubva kuna Diaborosi, apo Muviri wake waive urere mubwiro.
Mweya unoshamisa usingaonekwe uye humunhu hunoonekwa zvese zvaive muna Kristu – Shumba neGwaiana, Musiki uye Mudzikinuri.
ISAYA 43:1 Asi zvino zvanzi naJEHOVA, akakusika, iwe Jakobo, akakuumba, iwe Isiraeri, "Usatya hako, nokuti ndini ndakakudzikunura; ndakakudana nezita rako, uri wangu.
Mwari Baba vakatsanangurwa sezvose Musiki uye Mudzikinuri muTestamente Yekare.
Mweya unoshamisa usingaonekwe weMusiki uye Munhu Mudzikinuri mabasa maviri anogona kuitwa naJesu chete.
Jehova, seMweya waMwari usingaonekwe unoshamisa, haugoni kufira zvivi zvedu. Mwari haafi.
Jehova aifanira kuzviitira Muviri wemunhu. Mweya wake pawakabuda muMuviri, rwaive rufu.
Asi mufananidzo uyu unoita seVanhu vaviri. Zvisinei nekuti Jesu aionekwa seGwaiana.
Saka mufananidzo unonyanya kuratidzika seizvi:
Vangava vanhu vaviri here? Mwari Musiki ari pachigaro chehushe Mudzikinuri kana Muponesi Jesu akamira parutivi pechigaro chaMwari chehushe?
Kwete, ndizvo zvinotaurwa naIsaya.
Hamugoni kuona Muponesi akamira kana kugara parutivi paMwari Baba.
Saka Johane akaona chii?
Patinoverenga vhesi iri tinoita setinotarisira pasi chinhu chekuti Johane akaona Gwaiana pakati pechigaro chehushe.
Vanhu vaviri havagoni kugara pakati pechigaro chehushe chimwechete.
Uku kuedza kutiudza kuti Jesu mumwechete iyeye ndiye Musiki uye Mudzikinuri.
Zvino kunobva kwauya chikamu chakachenjera chinotinyengera kana tikasangwarira.
Kana Gwaiana riri pachigaro chehushe nakare, ringauye sei kuzotora Bhuku.
Gwaiana rakauya kuti ritore bhuku.
Haraizofamba kubva kune imwe nzvimbo sezvo raive ritori pachigaro chehushe.
Einstein ndiye munhu wezvesainzi wekutanga kupatsanura nzvimbo nenguva.
Nekuti hatizivi kuti muchina wenguva unovakwa sei, hatigoni kufamba munguva saka kazhinji hatimborangariri pamusoro pekufamba munguva.
Asi ndizvo zvakaitwa naJesu. SeMuponesi, asati atora Bhuku reDzikinuro, paaive agere pachigaro chehushe akatanga kufamba muMweya achidzokera munguva kuenda kumavambo chaiko. Kunoitei? Kuti anotarisa kana zano redzikinuro raive rakanaka. Paifanira kuva pasina kana kamukana kekukanganisa kuitira kuti Diaborosi akachenjera asawane mukana wekuzopunyuka murango wake waizouya. Satani anofanira kuguma ava mudziva remoto. Denga harizofadzi kana Satani akaramba akasunungurwa. Akaparadza zvakakwana.
Saka mumashure mekufamba munguva achidzokera kumavambo achinotarisa kuti zano reRuponeso raive rakasimba here uye achizomira kusvika pakutarisisa pakanguvana kekupedzisira chaiko, Jesu akabva adzoka munguva kuzotora Bhuku.
Pakuita izvi zvese haana kubvira abva pachigaro chehushe.
Asi zano reruponeso raive raongororwa rapasiswa. Mwari haana paanosiira chakaipa mukana.
Iyi iyambiro kwatiri. Tinofanira kuongorora zvatinotenda mazviri nekuzvipima neMagwaro tova nechokwadi chekuti hapana kurasika uye kurwisana kuripo.